Achọpụtara ụdị nke RansomEXX maka Linux | Site na Linux
Ndị nyocha si Kaspersky Lab achọpụtala a Linux ụdị dransomware malware "Mgbapụta".
Na mbido, RansomEXX kesara naanị na Windows nyiwe ma bụrụ onye ama ama n'ihi ọtụtụ isi ihe mere na mmeri nke usoro nke ụlọ ọrụ gọọmentị dị iche iche na ụlọ ọrụ, gụnyere Texas Department of Transportation and Konica Minolta.
RansomEXX encrypts data na disk wee choo ihe mgbaputa iji nweta igodo decryption.
A na-ahazi izo ya ezo site na iji ọbá akwụkwọ Ugochukwu de Meghee Isi mmalite. Ozugbo oru, malware na - eweputa igodo 256-bit ma jiri ya zoo ihe niile dị na faịlụ site na iji AES block encryption na ọnọdụ ECB.
Mgbe nke ahụ mechara, a na-emepụta igodo AES ọhụrụ ọ bụla, ya bụ, dị iche iche faịlụ na-ezoro ezo dị iche iche AES igodo.
Igodo nke AES ọ bụla na-ezo ezo site na iji igodo ọha RSA-4096 agbakwunyere na koodu malware ma tinye ya na faịlụ ọ bụla ezoro ezo. Maka nbibi, ihe mgbapụta ahụ na-enye gị ịzụta igodo nzuzo n'aka ha.
Akụkụ pụrụ iche nke RansomEXX bụ nke ya Jiri na ọgụ ezubere iche, n'oge nke ndị mwakpo na-enweta otu n'ime sistemụ na netwọkụ site na nkwekọrịta nke adịghị ike ma ọ bụ usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mgbe nke a gasị, ha na-awakpo sistemụ ndị ọzọ ma kesaa ụdị malware gbakọtara maka akụrụngwa ọ bụla wakporo, gụnyere aha ụlọ ọrụ na nke ọ bụla nkọwa kọntaktị dị iche iche.
Na mbido, n'oge mwakpo na netwọk ụlọ ọrụ, ndị mwakpo ahụ ha nwara ijide onwe ha nke ọtụtụ ebe ọrụ dị ka o kwere mee iji wụnye malware na ha, mana atụmatụ a ghọrọ ihe na-ezighi ezi na n'ọtụtụ ọnọdụ, emegharịrị usoro ahụ ka ọ bụrụ nke eji nchekwa ndabere na-akwụghị ihe mgbapụta ahụ.
Ugbu a atụmatụ ndị cybercriminal agbanweela y ihe mgbaru ọsọ ha bụ imeri usoro ihe nkesa ụlọ ọrụ na karịsịa na centralized nchekwa usoro, gụnyere ndị na-agba Linux.
Ya mere, ọ gaghị abụ ihe ijuanya ịhụ na ndị ahịa RansomEXX emeela ka ọ bụrụ ihe na-akọwapụta na ụlọ ọrụ ahụ; Ndị ọzọ na-arụ ọrụ ransomware nwekwara ike idokwa nsụgharị nke Linux n'ọdịnihu.
Anyị chọpụtara n’oge na-adịbeghị anya ihe ntinye faịlụ ọhụụ Trojan kere dị ka ELF na-arụ ọrụ ma zubere iji zoo data na igwe na-ejikwa sistemụ arụmọrụ Linux.
Mgbe anyị nyochachara nke mbụ, anyị hụrụ myirịta dị na koodu Trojan, ederede nke ihe mgbapụta ahụ, yana usoro izugbe maka ịpụnara mmadụ ihe, na-egosi na anyị achọtala ụlọ Linux nke ụlọ RansomEXX nke a maara na mbụ nke ransomware. A maara malware a iji wakpo nnukwu ụlọ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma na mbido afọ a.
RansomEXX bụ ezigbo Trojan. Ihe nlele ọ bụla nke malware ahụ nwere koodu aha nke nzukọ ahụ tara. Ọzọkwa, ma ndọtị nke faịlụ ezoro ezo na adreesị ozi-e iji kpọtụrụ ndị na-apụnara mmadụ ihe na-eji aha onye ahụ.
O yikwara ka mmeghari a amalitela. Dabere na ụlọ ọrụ cybersecurity Emsisoft, na mgbakwunye na RansomEXX, ndị na-arụ ọrụ n'azụ Mespinoza (Pysa) ransomware emepụtakwala Linux dị iche site na ụdị mbụ nke Windows ha. Dabere na Emsisoft, ụdị RansomEXX Linux dị iche iche ha chọpụtara bụ nke mbụ emebere na July.
Nke a abụghị oge mbụ ndị ọrụ malware tụlere ịmepe ụdị Linux nke malware ha.
Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịgụta okwu banyere KillDisk malware, nke ejirila mebie grid ike na Ukraine na 2015.
Nke a dị iche iche mere "igwe Linux enweghị ike ịbu, mgbe o zichara faịlụ ahụ ma chọọ nnukwu ego mgbapụta." O nwere nsụgharị maka Windows na nke Linux, "nke bụ n'ezie ihe anyị anaghị ahụ kwa ụbọchị," ka ndị nchọpụta ESET kwuru.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele nkọwa nke mbipụta Kaspersky Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Achọpụtara ụdị nke RansomEXX maka Linux
Zingtụnanya! Ezi post! Cheers
Linux bụ naanị nzọpụta m iji zere Malware, n'ezie ihe ihere ...
Zaghachi na LinuxMain
Lee nnukwu! ANY ALL niile maara na RANSOMEXX NA-agagharị!
Zaghachi na #MakeRansomExxGreatAgain
Zaghachi Julio Calisaya SI3K1
Mutt, ezigbo onye ahịa email CLI